Dagaal xalay ka dhacay magaalada Balad Xaawo iyo Jubaland oo guulo ka sheegatay – Calanka.com
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in jabhad fallaago ah isla markaana dowladda kenya ay hubeysay ay u soo tallowday xuduudka Soomaaliya ayna weerar ku qaaday gobalka Gedo.
War-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkaas oo ay ku tilmaantay dowladdu mid sharci darro ah.
Dhanka maamulka Jubalan, madaxweyne ku xigeenka koobaad, Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in “ciidamadooda weerarka lagu soo qaaday ka dibna ay iska caabiyeen”.
“Iska caabin ka dib waxaa la isla galay magaalada haddana halkaas ayey wax ka socdaan”, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
“Saraakiisha hadda i soo wacday waxay ii sheegeen sida janaraal Cabaas oo kale inuu isaga isteeshinka joogo, iyo xarunta degmada, laakiin hadde magaaladu waa magaalo weyn oo daafaheedu ay weli xabbadaha ka dhacayaan,” ayuu hadalka ku daray.
Warka ka soo baxay dowladda oo uu ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sidaan u dhignaa.
Muqdisho January 25, 2021, Dowlada Federaalka Soomaaliya waxay cadaynaysaa in Jabhaddii fallaagada ahayd ee ay soo hubaysay Dowladda Kenya oo caawa u soo tallowday xuduudda Soomaaliya ayaa soo weerartay Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Beled Xaawo.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo leh ugu jilib dhigay duulaankaas sharci-darada ah ee shisheeyuhu soo abaabulay.
Waxan si adag u cambaaraynaynaa duulaankaas gardarada ah ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya kaas oo qilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta Gobolka iyo xeerarka caalamiga ah ek u dhisan is xaq dhawrka iyo ilaalinta madaxbaanaanida qaranimo. “Faahfaahinta warkaas waa idinla soo wadaagaynaa”.
Cismaan Abokor Dubbe Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.